Izulu elincane eChibini - I-Airbnb
Izulu elincane eChibini
Elgin, Ontario, i-Canada
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Jeanie
U-Jeanie Ungumbungazi ovelele
Indlwana yangasese, eyisithuthuthu phakathi kwamaphayini aphakeme abheke i-Whitefish Lake. Siyingxenye yohlelo lwe-Rideau Canal, isikhungo esiqokiwe samagugu omhlaba. Ukufinyelela kalula emanzini nasezindleleni ezihamba ngezinyawo kumahektare angama-260 wehlathi elingathuthukisiwe. Ifaneleka kakhulu abathandi bemvelo, abafuna ubumfihlo, nabadobi, noma nje uhambo lwempelasonto yothando. Uzokwazi ukufinyelela isikebhe esigwedlwayo se-aluminium, isikebhe se-aluminium springbok, ibhodi lokugwedla lokumisa, kanye nama-kayak amabili amasha, aphezulu.
Izivakashi zisebenzisa okukhethekile kwekotishi, nompheme walo, kanye nedekhi/indawo yokuhlala engasemanzini. Kukhona indawo yokucima umlilo ekotishi futhi kukhona izinkuni zokubasa. I-BBQ yegesi emphemeni ene-propane enikeziwe.
isiqandisi esiyi-Full Size
4.93 · 83 okushiwo abanye
Sisendaweni enhle enamahlathi eduze komsele iRideau. Le ndawo inokuningi engakunikeza izivakashi ngezikhiya zaseJones Falls nje km. kude ngamanzi. Kukhona i-Black Smith foundry enikeza izinkambo zomlando. Ngokuqondile ngaphesheya kwechibi ukusuka kukhabethe lakho indawo ejulile yechibi enamawa amadwala kulabo abanesibindi sokutshuza. Indawo yokuqwala izintaba eyaziwa ngokuthi i-Rock Dunder nayo ikule ndawo yechibi (google Rock Dunder!) futhi ingafinyelelwa ngemoto edolobhaneni lase-Morton, noma ngesikebhe noma ngesikebhe esigwedlwayo esihlinzekiwe (ngaphansi kwekhilomitha.) Amabhantshi okuphila ngosayizi abahlukahlukene anikeziwe. Kukhona futhi umzila endaweni yethu okuholela edwaleni eliphakeme elinokubukwa okumangalisayo kwechibi.
Isitolo segrosa esinebhikawozi esitolo, isitolo sotshwala, ikhemisi, ibhange kanye nesitolo sehardware cishe u-10 km. shayela.
Kubathengi kunezitolo ezihlukile eNewboro naseWestport, ngaphansi kwamakhilomitha angama-20.
Indawo yabavakashi eThousand Island, imizuzu engama-30 ngemoto. Futhi-ke, i-Kingston inikeza inqwaba yemisebenzi, izindawo okuyiwa kuzo, kanye nezindawo zokudlela ezingezizo zonke. Singaphakamisa i-Kingston Penitentiary Tour, (ukubhuka kuyadingeka) , i-Fort Henry, nemakethe yabalimi kanye namamuvi amahhala namakhonsathi endaweni engasemanzini yedolobha.
Ikhaya lethu litholakala cishe ngamamitha angama-200 ukusuka endlini encane futhi sihlukaniswa izihlahla/izihlahla eziminyene, okwenza zombili lezi zakhiwo zibe yimfihlo kakhulu. Sisendaweni ngesikhathi sokuqasha uma usizo noma ulwazi ludingeka.
Sinelebhu emnyama enobungane futhi enobungane kakhulu eneminyaka engu-7 ezulazula ngokukhululekile endaweni futhi engase ikubingelele lapho ufika.
Ikhaya lethu litholakala cishe ngamamitha angama-200 ukusuka endlini encane futhi sihlukaniswa izihlahla/izihlahla eziminyene, okwenza zombili lezi zakhiwo zibe yimfihlo kakhulu. S…
UJeanie Ungumbungazi ovelele